Wasiirka Dastuurka oo sheegay in laga been abuurray qodobo ku qoran Dastuurka
Wasaaradda Dastuurka, Arrimaha Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in laga been sheegay Qodobo ku qoran Dastuurka dalka, kuwaas oo ay ku tilmaamay in looga gol leehay in lagu Hakiyo Horumarrada dalka ka socda.
Wasiirka Dastuurka, Arrimaha Federaalka iy Dib u Heshiisiinta Xukuumadda Soomaaliya mudane C/raxmaan Xoosh Jabriil oo Warreysi siinayay Telefishinka qaranka ayaa sharraxaad ka bixiyay arrimaha Dastuurka iyo qodobada laga been sheegay, isagoo xusay in Dastuurka Soomaaliya aan weli la akhrin, shacabka Soomaaliyeedna looga baahan yahay in ay Akhriyaan, si ay u arkaan qodobada laga been sheegay.
Sidoo kale wasiirka ayaa xusay in Qodobka Labaad Farqaddiisa Koowaad ee Datuurka ay ku qoran tahay in Dastuurka Soomaaliya saldhig looga dhiggay Qur’aanka Kariimka ah iyo Sunna Nabiga, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay yihiin shacab guud ahaan Muslimiin ah.
Mudane C/raxmaan Xoosha ayaa hoosta ka xaqiiqay in Dastuurka ay ku qoran tahay in Soomaaliya uu yahay dalka African, isla markaana ka mid ah shacuurka Carrabta, isagoo intaa raaciyay in dalka Dastuurka ku hoggaaminayo in la dhiso Xukuumadda loo dhan yahay oo ka shaqeysa Cadaallada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka Dastuurka ayaa tilmaamay in Dastuurkii Soomaaliya uu lahaa 1960-kii iyo midka hadda la sameeyay in Diinta Islaamka si wanaagsan loogu salleeyay midka hadda Soomaaliya loo sameeyay.
“Shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in aysan u dhagtaagin been abuurka ay wadaan shaqsiyaadka dowladnimada ka soo horjeedda, waxaan ummadda Soomaaliyeed ku boggaadinayaan in ay qaadato go’aan geysinimo leh, si dalka loo gaarsiyo meel wanaagsan” ayuu yiri wasiirka Dastuurka. HOME